Grisi - ALinks
Ufumana njani umsebenzi eGrisi?
January 8, 2022 UAntika Kumari Grisi, imisebenzi
Ukuba ungummi waseMelika, eCanada, okanye ungummi ongeyena we-EU kwaye uceba ukufudukela eGrisi, kufuneka wazi ukuba imvume yokusebenza yamaGrike ibandakanya ukuhlala nokusebenza eGrisi. Ngoko ngaphambi kokuba ukhangele imisebenzi
IGrisi amazwe asimahla
Septemba 15, 2021 UMaitri Jha Grisi, hamba, ivisa
Amazwe aseGrisi awadingi visa yokundwendwela amazwe ali-114. Abaphethe ipasipoti yamaGrike banokufumana ii-visa ezingama-35 okanye ii-visa ezili-15 xa zifika. IGrisi inabemi abazizigidi ezili-10.9, kunye neAthene njengekomkhulu layo. Ukuhamba ngaphandle kweVisa
Uyifumana njani i-visa eGrisi?
Novemba 29, 2020 IShubham Sharma Grisi, ivisa
Kuxhomekeka kuhambo lwakho oluya eGrisi, iintlobo ezininzi zeevisa ziya kusebenza kulo msitho. Kwimeko apho ufuna ukuya kutyelelo, ukufunda, okanye ukusebenza kwaye uhlala apho, kuya kufuneka ufake isicelo seGrisi Schengen eyahlukileyo
Ufundela njani iYunivesithi eGrisi.
Ngamana 7, 2020 UAntika Kumari Grisi, isifundo, hamba
Ukufundela iYunivesithi yaseGrisi kunokuba yinto ethandekayo yokuhendela abafundi bamanye amazwe. Uhambo lokuya kweli lizwe linomdla uvumela abafundi ukuba bazibhaptize ngokwenkcubeko eyahlukileyo yenkcubeko kunye nembali, zidityaniswa nomoya ocebisayo. IGrisi nayo
IGrisi zidibanisa, iwebhusayithi yolwazi, amaqela eengxoxo
Septemba 11, 2019 demi Grisi, ababaleki, amakhonkco aluncedo
I-doc iqulethe malunga nolwazi lwase-Greece Ie amakhonkco okanye amaxwebhu apheleleyo malunga nabafuduki kunye neembacu. Ibandakanya lonke ilizwe kwiinkalo ezininzi ezinjengendawo yokukhosela, izindlu, imfundo, ukhathalelo lwempilo kunye nabanye. Ulwazi lweQela leeNkcukacha / lamaVolontiya eAthene- IINKONZO ZE-ASYLUM IZIBHENGEZO